Beesha H/gidir oo war cad kasoo saartay xukuumadda cusub ee shalay lagu dhawaaqay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Beesha H/gidir oo war cad kasoo saartay xukuumadda cusub ee shalay lagu dhawaaqay (DHAGEYSO)
Odayaasha iyo nabadoonadda beesha H/gidir ayaa si buuxda u taageertay xukuumadda cusub uu maalintii shalay ku dhawaaqay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Nabadoon Xasan Cilmi Yaxye oo ka mid ah odayaasha ugu waaweyn beeshaasi ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan xukuumadda cusub ee shalay lagu dhawaaqay, isagoona dhinaca kale sheegay inay si buuxda u taageerayaan.
Nabadoonka ayaa ku baaqay in ciddii ka hor-timaada xukuumadda cusub ee lasoo dhigay dhagaxyo lagala hortago, oo aan loo ogolaan inay carqaladeyso xukuumadda cusub oo haatan u baahan in fursad la siiyo.
“Xildhibaanada Soomaaliyeed annaga ayaa idin dooranay, waxaan idinka codsaneynaa in xukuumadda cusub ee lasoo dhisay aad cod aqlabiyad ah ku taageertaan, ninkii xildhibaan ah ee la arko inuu jaleeco waa in shacabku dhagaxyeeyo” Sidaas waxaa yiri Nabadoon Xasan Cilmi Yaxye.
Dhinaca kale, Iimaamka beesha H/gidir C/laahi Khaliif Rooble oo isna ka hadlay fikirkiisa ku aadan xukuumadda cusub ayaa sheegay in xukuumadda ay howl adag u taallo ayna noqdaan kuwii kasoo baxa rajada ay shacabka ka qabaan islamarkaana noqda kuwa u gurmada dadka abaaraha tabaaleysan.
“Waxaan leennahay xildhibaanada in markii la idin ansixiyo, noqda kuwa dadka u adeega, oo masaakiinta gacanta qabta, balse ha noqonina kuwa guryo ka dhista hantida shacabka” Sidaas waxaa yiri Iimaamka beesha H/gidir C/laahi Khaliif Rooble.